बाइबलका कथाहरू: असल छोरा र खराब छोरा - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
चित्रमा कयिन र हाबिललाई हेर त। उनीहरू ठूला भइसकेका छन्। कयिन खेतमा काम गर्छ। ऊ अन्न, फलफूल र सागपात उमार्छ।
हाबिलचाहिं भेडा चराउँछ। ऊ भेडाका पाठाहरूको स्याहारसुसार गर्न मन पराउँछ। ती पाठाहरू केही समयपछि ठूला हुन्छन् र त्यसपछि हाबिलले पूरै बगालको हेरचाह गर्नुपर्छ।
एकदिन कयिन र हाबिलले परमेश्वरका लागि भनेर केही उपहार ल्याउँछन्। कयिनले आफ्नो खेतमा फलेको केही खानेकुरा ल्याउँछ। हाबिलले भने आफूसित भएको सबैभन्दा राम्रो भेडा ल्याउँछ। यहोवा हाबिल र उसको उपहारसित खुसी हुनुहुन्छ। तर कयिन र उसको उपहारचाहिं उहाँलाई मन पर्दैन। किन, तिमीलाई थाह छ?
किनभने कयिनको भन्दा हाबिलको उपहार राम्रो छ। तर यति मात्र होइन। हाबिल असल पनि छ। ऊ यहोवालाई अनि आफ्नो दाइलाई माया गर्छ। तर कयिन खराब छ; ऊ आफ्नो भाइलाई माया गर्दैन।
यसकारण परमेश्वरले कयिनलाई उसको नराम्रो बानी छोड्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर कयिनले सुन्दैन। परमेश्वरले हाबिललाई बढी मन पराउनुभयो भनेर कयिनलाई असाध्यै रिस उठ्छ। एकदिन उसले हाबिललाई ‘आऊ हामी खेतमा जाउँ’ भन्छ। त्यहाँ उनीहरू एक्लै भएपछि कयिनले आफ्नो भाइलाई कुट्छ। उसले भाइलाई बेस्सरी कुटेर मार्छ। कयिनले कस्तो नराम्रो काम गऱ्यो, हगि?
हाबिल मरे पनि परमेश्वरले उसलाई अझै सम्झिरहनुहुन्छ। हाबिल असल थियो र असल मान्छेलाई यहोवाले कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। यहोवा परमेश्वरले एकदिन हाबिललाई फेरि जिउँदो बनाउनुहुनेछ। त्यसपछि हाबिल फेरि कहिल्यै मर्नेछैन। ऊ सधैंभरि यही पृथ्वीमा बाँचिरहनेछ। हामीले हाबिलजस्तो असल मान्छेलाई साथी बनाउनुपर्छ।
परमेश्वरलाई कयिनजस्तो खराब मान्छे मनपर्दैन। यसकारण कयिनले आफ्नो भाइलाई मारिसकेपछि परमेश्वरले उसलाई धेरै टाढा धपाएर सजाय दिनुभयो। कयिन टाढा अर्कै ठाउँमा भागेर जाँदा उसले आफ्नी बहिनीलाई पनि लिएर गयो। त्यसपछि कयिनले आफ्नै बहिनीसित बिहे गऱ्यो।
केही समयपछि कयिन र उसकी पत्नीले छोराछोरी जन्माउन थाले। आदम र हव्वाका अरू छोराछोरीले बिहे गरे अनि उनीहरूले पनि छोराछोरी जन्माए। त्यसपछि पृथ्वीमा धेरै मान्छे भयो। उनीहरूमध्ये कसै-कसैको कथा अब हामी पढौं है।
उत्पत्ति ४:२-२६; १ यूहन्ना ३:११, १२; यूहन्ना ११:२५.
कयिन र हाबिलले के काम गर्छन्?
कयिन र हाबिलले यहोवाका लागि के उपहार ल्याउँछन्?
हाबिलको उपहारसित यहोवा किन खुसी हुनुहुन्छ तर कयिनको उपहारसित चाहिं उहाँ किन खुसी हुनुहुन्न?
कयिन कस्तो मान्छे थियो र यहोवाले उसलाई कुन बानी छोड्नुपर्छ भन्नुहुन्छ?
खेतमा भाइसित एक्लै हुँदा कयिनले के गर्छ?
भाइलाई मारेपछि कयिनलाई के भयो, वर्णन गर।
उत्पत्ति ४:२-२६ पढ्नुहोस्।
कयिन कति खतरनाक अवस्थामा पुगेको थियो भनी यहोवाले कसरी बताउनुभयो? (उत्प. ४:७)
कयिनले आफ्नो हृदयमा लुकेको कुरा कसरी प्रकट गऱ्यो? (उत्प. ४:९)
निर्दोष व्यक्तिको ज्यान लिनु, यहोवालाई कस्तो लाग्छ? (उत्प. ४:१०; यशै. २६:२१)
पहिलो यूहन्ना ३:११, १२ पढ्नुहोस्।
कयिन किन रिसले चूर भयो र यसबाट आज हामी के सिक्न सक्छौं? (उत्प. ४:४, ५; हितो. १४:३०; २७:४)
हाम्रो परिवारका सबै सदस्यहरूले यहोवाको विरोध गरे तापनि हामी आफ्नो निष्ठा कायम राख्न सक्छौं भनी बाइबलले कसरी देखाउँछ? (भज. २७:१०; मत्ती १०:२१, २२)
यूहन्ना ११:२५ पढ्नुहोस्।
धार्मिकताको खातिर मर्नेजति सबैलाई यहोवा के आश्वासन दिनुहुन्छ? (यूह. ५:२४)
बाइबलमा हाबिलबारे थोरै मात्र बताइएको छ। तर पनि हामी तिनी र तिनको विश्वासबारे के-कस्ता कुरा थाह पाउन सक्छौं?